Qaraxyo Ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Ankara ee dalka Turkiga – STAR FM SOMALIA
Qaraxyo Ismiidaamin ah oo ka dhacay Magaalada Ankara ee dalka Turkiga
Labo qof oo waday Baabuur walxaha Qarxa laga soo buuxiyay ayaa weerar ku qaaday goob ay ciidanka Booliska dalka Turkiga ay ka sameynaayeen howgal oo ku taalla Magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in Qaraxyada lagu diyaariyay goobta ay ciidanka ammaanka ay ka wadeen howgalka, ka hor inta aaney ciidamada soo gaarin halkaasi.
Labada qof ee is qarxiyay ayaa la sheegaya in ahaayeen Lab iyo dhidig sida ay shaacisay Wakaalada Wararka ee dalka Turkiga , waxaana la sheegaya in Qaraxyadaasi ay ku dhinteen Askar ka tirsan ciidanka dowladda Turkiga.
Ilaa iyo hada lama shaacin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay Qaraxyada ka dhacay dalka Turkiga , laakiin inta badan weerarada lagu qaado dalka Turkiga waxaa lagu eedeeyaa kooxda PKK oo dagaal culus kula jirta dowladda Turkiga.
Ciidamada Booliska dalka Turkiga ayaa baaraya labada ruux ee qaraxyada fuliyay, halka ay ka soo abaabuleen weeraradaasi.
Ammaanka goobta qaraxyada ay ka dhaceen, ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana lagu soo daadiyay ciidamo Boolis ah oo dheeraad ah.
Dood kulul oo markale dhex martay Musharixiinta Trump iyo Hillary
Ruushka oo gantaalada lidka Diyaaradaha ku rakibtay Saldhigyadooda Syria